Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Senegalese Habib Diallo Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography
Anyị Habib Diallo Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, arsgbọala, Wortọ Net, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara ọkachamara na Senegal, site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Habib Diallo's Bio.
Ndụ mbido na ịrị elu nke Habib Diallo.
Ee, onye egwuregwu si Ezinaụlọ ndị Senegal amaara na inwe ezigbo onyinye nwere nnukwu anya maka ịme goolu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị nke Habib Diallo's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ mbu na Ezigbo Ezinụlọ
Malite, nne na nna Habib Diallo nyere ya aha- Habibou Mouhamadou Diallo mgbe amuchara ya. Na aha “Habib”Nke anyị niile maara bụ naanị aha otutu. Habib Diallo mụrụ na 18th ụbọchị nke June 1995 n'obodo Thies, Senegal.
Dabere na foto anyị nwere nke ụmụnne ya, ọ dị ka onye amụrụ bọọlụ ka nwa nke abụọ na nwa nye nne na nna ya. N'okpuru bụ foto nke nne na nna Habib Diallo bụ ndị sitere na ezinụlọ ha Thiès, Senegal.
Ndị nne na nna Habib Diallo.
Banyere Habib Diallo Gini: Obodo [Thiès] ebe ezinụlọ Habibou Mouhamadou Diallo si bia ka a na-ahụta dị ka obodo nke atọ kachasị buo ibu na Senegal nwere ọnụọgụgụ nke gọọmentị e mere atụmatụ na ọ bụ 320,000 na 2005. Obodo a dị kilomita 67.3 site na Dakar, isi obodo mba ahụ. Ugbu a, gini bu ihe puru iche banyere obodo Thies?… Onye amara ya mara Tapestry- Formdị ụdị akwa akwa, nke ejiri aka na aka na-ekwe ákwà.
Habib Diallo nwere ezinụlọ ya nke sitere na Senegal nwere mgbọrọgwụ gbadaa na Thies, Senegal.
Dị ka ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ na-esite na Senegal, ndị nne na nna Habib Diallo rụrụ obere ụlọ ezinụlọ dị ala. Nke a pụtara na ndị na-agba ọsọ sitere na nkezi ezinụlọ. Habib Diallo toro na ụmụnne ya, nwanne nwoke okenye na ụfọdụ ụmụntakịrị nwoke na nwanyị ndị anyị gosipụtara na isiokwu a.
Habib Diallo Oge Afọ: Na-etolite na Thies, ndị nne na nna Habib Diallo bụ ndị na-enweghị ike imeli ya, nchịkọta kachasị ọhụrụ nke ihe egwuregwu ụmụaka. Naanị ya nwere bọl bọl nke ọ na-egwu ọtụtụ oge ụbọchị niile.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Site n'oge Habib Diallo dị na nwata, ọ nweghị mmasị na agụmakwụkwọ ka nwatakịrị ahụ họọrọ ịkụ bọl karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ amaara na o nwere ikike ma nwee ike ime ihe n’egwuregwu football.
Hapụ ezinụlọ ya: Na-echekwa ọrụ ọrụ, na-enwe polytechnic na Mahadum, obodo Thiès enyeghị Habib ihe ọ chọrọ. Ebe ọ nụrụ Akụkọ banyere ịga nke ọma na football site na isi obodo Senegal (Dakar), Nwatakịrị ahụ mere mkpebi ịhapụ ezinụlọ ya n'azụ iji chụọ nrọ ya. Onye na-eto eto mgbe emechara ngwa ngwa kpọbatara maka ule site n'aka Generation Foot, otu ọgbakọ Dakar (isi obodo Senegal) nke Mady Touré guzobere na 2000.
Diallo nke aka anyị gụrụ akwụkwọ na football na Generation Foot.
Dịka ọtụtụ ndị nwara ma nweta agam n’ihu ya bụ; Sadio Mane na Papiss Cissé, wdg, Habib Diallo nwekwara ikpe na-aga nke ọma na Generation Foot. N'oge ahụ na ugbu a, onye ọ bụla egwuregwu na Generation Foot nwere otu ihe jikọrọ- "Nrọ Europe ”. Maka Habib, mkpebi ya siri ike igwuri egwu na klọb Europe adịghị ka ọhụụ.
Ị maara?… Kemgbe 2003, Generation Foot enwetawo aha maka mmekọrịta ya na French Club FC Metz. Ọtụtụ, a na - ewere ọgbọ ọgbọ dịka Ọdọ mmiri Africa nke FC Metz. Ndị na-egwu egwuregwu si Metz na-abịakarị ahọrọ ndị ọgbọ Generation Foot ka ọ kpọọ maka ha na Europe.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ndụ Mmalite
Mgbe o mere Ezinaụlọ ya: Mgbe ọ nọ na Generation Foot, Habib Diallo ji obi ike na-egwu bọl, na-enwe omume nke ịgabiga akara ya ma jiri bọl bọọlụ mee ihe na-acha anụnụ anụnụ. N'oge na-adịghị anya, ọ ghọrọ ihe onwunwe kachasị agụmakwụkwọ. Nwa nwoke si obodo Thies hụrụ ka a na-agbanwe ọdịnihu ya ka ọ nabata ozi ọma.
Ị maara?… Mpako nke ndị nne na nna na ndị òtù ezinụlọ Habib Diallo amaghị oke n'oge a họpụtara ya ka ọ bụrụ ndị FC Metz scouts ga-egwu na agụmakwụkwọ ha na Europe. N'okpuru ebe a, ọ na-egosi na nwa nwoke mpaghara nwere ike ịbụ onye mbụ na dum usoro ezinụlọ ịbanye na Europe.
Ọ dị ka nwatakịrị obodo ahụ bụ onye mbụ n'ime ezinụlọ ya rutere onwe ya na Europe.
Habib Diallo sochiri Rigobert Song, Kalidou Koulibaly, Papiss Cissé na Sadio Mané ndị ekwuru na ha bụ mkpụrụ nke nkwekọrịta gara aga n'etiti FC Metz na klọb Afrika. Ị maara?… Ọganiihu ya na ọgbọ ya mere ka ụzọ dị amasị ndị mmadụ Islmaila Sarr iso.
Na mbu, ọ dịghị mfe, mana Habib Diallo aghaghị ịmanye onwe ya ka ọ biri naanị ya na France n'agbanyeghị enweghị onye ezinụlọ ọ bụla gbara ya gburugburu. N'oge na-adịghị anya, nwatakịrị ahụ na ụlọ ọrụ ahụ nwee mmetụta, ihe ngosi nke hụrụ ọkwa dị ngwa ngwa.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ụzọ Ebube
Mgbe Nje Na-aga Ahụhụ: Mgbe o masịrị ndị nkuzi ntorobịa ya, Habib Diallo nwetara akwụkwọ agụmakwụkwọ na afọ 2014. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, a chụpụrụ nwata ahụ ka ọ gbaa egwu na Metz II (FC Metz N'okpuru 23s). Intobanye na ndị otu klaasị siri ike karịa ka ọ tụrụ anya. Habib nwere nkụda mmụọ hụrụ na ọ nweghị ike ịsọ mpi ma na-ebuso ndị ya na ha na-esote isi na FC Metz ọkwa. Ọ meriri na asọmpi otu egwuregwu mbụ nke Metz.
Mgbe Ihe Na-aga Siri Ike.
Ọ malitere ịkwụ ụgwọ Ya: Na nke ọzọ iji nweta ahụmịhe, Habib Diallo kpebiri ịga na-ewulite onwe ya ka ọ na-aga ịkwaga ego. A kpọgara ya na Stade Brest, ụlọ egwuregwu bọọlụ France nke ama ama ama etolitere Franck Ribéry. Na Brest, Diallo gbara mbọ na-ewulite ahụmịhe ya site n'olile anya itu asọmpi egwuregwu mbụ nke FC Metz. Mgbe ọ na-achọ ime nke ọma, ọ kwuru n'otu oge n'okwu ya;
“Dị ka ọtụtụ ndị egwuregwu, ọ bụghị mgbe niile ka ị na-ewu ụlọ n'abalị. Don't gaghị n’elu ozugbo ozugbo. Mgbe ụfọdụ ị ga-eji nwayọ nwayọ jiri nwayọ nwayọ. ”
Ziri ezi maka ncheta ya: Maka oge 2017-18 nke Ligue 1, FC Metz diri mkpọtụ mkpọtụ, tufuru iri na otu n'ime egwuregwu iri na abụọ mbụ ha. Onye njikwa ụlọ ọrụ ahụ Frédéric Hantz nọ n'ọchịchọ na-achọ onye ọkpụkpọ ga-ewetara ndị egwu bọọlụ. Nke a mere ka Habib laghachite na ego iji nweta ohere ikpeazụ ya.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Na-ewu ewu Akụkọ
Kama ịgba egwu, onye egwuregwu Senegalese siri ike gaa n'ike dịka ọ na-enyere klọb ya aka gbakee site na nkpagbu ha. Habib Diallo ghọrọ anụ ọhịa na nloghachi ya - onye na-akụ na igbe na akara nke ọgbọ ọhụrụ nke FC Metz. A maara ya nke ọma ụdị egwuregwu ike anụ ahụ, ọsọ, ike ikuku (dịka C Ronaldo), + ihe dị ike ma zie ezi dị ka Didier Drogba.
Njedebe Kachasị nke Senegalese Star si n'obodo Thies. Ọ ghọrọ FC Metz's Hero.
Ị maara?… Igwe egwuregwu breakout na igwe ihe mgbaru ọsọ gbagoro mgbaru ọsọ 26 nke mgbaru ọsọ ekele his ebube ebube ngwakọta nke ziri ezi na ike. Na tọ bụ ụbọchị 26 nke Eprel 2019, Habib Diallo enyerela ndị klọb ya aka iweghachite nkwalite na Ligue 1. Ndị otu FC Metz ya gụchara mbụ na tebulu Ligue 2.
Igwe kpakpando ndị Senegal nwetara ịrị elu meteoric na FC Metz, na-eduga ndị otu ya iji nweta nnukwu nsọpụrụ.
Njikọ French bụ n'ezie otu n'ime ọgbakọ ndị kachasị na Europe maka ịzụlite ikike dị ka a hụrụ na nke ndị na-amasị ya Mbappe, Nsogbu, Benzema, Nicolas Pepe, Moussa Dembele na nso nso a Victor Osimhen. Ndepụta na-aga n’ihu. Obi siri anyị ike na a ga-atụkwasị Habib Diallo na ha. Eziokwu bụ, o nwere ikike ịbụ ọdịnihu nke football football. Diallo nwere ike ịbụ onye na-esote ya Drogba… Nanị ikwu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ mmekọrịta
Ugo elu nke ihe aka football nke Senegal mere n'ezie ka Habib bụrụ nwoke na-eme nke ọma. N'ihi ya, ọ bụ ụfọdụ na ọtụtụ Fans (ọkachasị ụmụ nwanyị si Senegal) ga-amalite ịtụgharị uche na ajụjụ ndị a; Ọnye na-bụ Habib Diallo's Girlfriend?.... Ọnye na-bụ Nwunye Habib Diallo?… Ndi Habib Diallo lụrụ Di?
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ (ọkachasị ụmụ nwanyị) atụgharịwo uche na ndụ ịhụnanya nke Senegalese.
Eeh !! Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha mara mma Diallo yana ọganiihu ọkachamara ya agaghị eme ka ọ nọrọ n'elu ndepụta ọ bụla enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye chọrọ.
Eziokwu bụ, n'azụ onye na-eme egwuregwu bọọlụ gara nke ọma, o doro anya na nwanyị ga-adị ma ọ bụ nwunye ma obu nne. Ọ bụ nne nke ụmụ ya (nke dị n'okpuru). Mmekọrịta Habib Diallo na nwunye ya ma ọ bụ mama mama n'ezie ọ na-agbanahụ nyocha nke ọha na eze naanị n'ihi na ọ bụ nke onwe ya na ikekwe ihe nkiri. Nchọpụta anyị ekpugheala na ọ bụ nne na nna nke ụmụ mara mma abụọ (nwata nwoke na nwanyi) Onye nwunye ya chere na nne ya ma ọ bụ mama ya.
Foto a bụ Habib na ọnọdụ emume ya na nwa ya nwanyị na nwa ya nwoke.
Ọ bụ ezigbo nne na nna: Ezinaụlọ ọ bụla nwere obi ụtọ chọrọ nna na-ahụ n'anya na Habib Diallo dabara otu. Nna ahụ dị mpako na-ekerịta foto na-egbu egbu na ibe ya na Instagram ebe o yiri ka ọ nwere ahụ iru ala kpamkpam na nwa ya nwanyị mara mma na-enwe ezumike anwụ.
Egosiri ụwa na ọ bụ nne na nna magburu onwe ya nye ụmụaka ya.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - si ebi ndụ
Jụọ onye ọ bụla na-apụ n'okporo ụzọ Senegal ma ọ bara uru ka ọ bụrụ onye egwuregwu na-agụ agụụ ma ha ga-ekwu OBU. Habib Diallo bụ ezigbo ihe atụ nke onye n’enweghị ihe ọ bụla ghọrọ onye egwu ịgba ọsọ nde. N’oge a na-ede akwụkwọ, ọ na-ebi ndụ okomoko, nke ụgbọ ala ya mara mma na-ahụ nke ọma n’etiti ihe ndị ọzọ mara mma dị na ya.
Ọ na-ebi ndụ okomoko Eziokwu na-adị mfe ịhụ site n'ụgbọ ala ya mara mma nke ọ na-ama gburugburu obodo.
Gbaso ihe ndị ọzọ kwuru banyere ụdị ndụ ya, ọtụtụ ndị ọkachasị ọkachasị ndị hụrụ ụgbọ ala ya ga-ajụrịrị… Kedu ụgwọ ọrụ Habib Diallo na ụgwọ kwa afọ?
Onye na-agba bọọlụ n'oge ede akwụkwọ na-enweta ụgwọ ọrụ kwa izu nke € 18,500K na ụgwọ ọrụ kwa afọ nke.€962,000K, Chaị!… a na-egosi ya ibi ụdị ndụ dị egwu. Ị maara?… Nwa nwoke na Senegal kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 9 iji nweta otu ihe Habib na-akpata na otu ọnwa.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ Ezinụlọ
Kedu ka ọ na-adị n'inwe ndị egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma dịka ezinụlọ na-egbo mkpa ezinụlọ? Akụkụ a na-akọwa ya niile. N'ebe a, anyị na-enye gị ihe ndị ọzọ gbasara ezinụlọ Habib Diallo na-amalite site na ndị mụrụ ya.
More banyere Nna Habib Diallo: A maara Ousseynou Diallo bụ nna nna nke Habib dị mpako. Nwoke dị umeala n’obi ma gbadata n’ụwa dịka a hụrụ n’okpuru ebe a ajụla ịgbanwe ibi ndụ ya n’agbanyeghi na ị nwere ọkpara nwoke n’egwuregwu.
A na-agba papa Habib Diallo ajụjụ ọnụ.
Ousseynou Diallo nakweere ndị nta akụkọ n'ime ụlọ ochie ya ebe ọ na-atụle ihe ịga nke ọma nwa ya na football. Ọfọn, ọ bụ naanị obere oge tupu Habib amanye nna ya ịkwaga ezinụlọ ya n'ụlọ obibi.
More na nne Habib Diallo: Nnukwu nne nke Africa amụọla ụmụ nwoke ndị nwoke na nne nwere obi ụtọ nke Habib Diallo abụghị otu. N'ikwu okwu na onye nta akụkọ nke Thies, nnukwu nwanyị ahụ kwupụtara obi ya banyere etu mpako ọ bụ ịbụ nne Habib Diallo.
Nne Habib Diallo na-agwa Onye nta akụkọ okwu banyere ihe ịga nke ọma nwa ya nwoke.
Habib Diallo kwupụtara oke akụkụ nke ihe ịga nke ọma ya na azụlite nne ya nyere ya. Nwanyị ahụ ji ofufe Chineke kpọrọ ihe na-enwe mmasị mgbe nile ịhụ ka nwa ya nwoke toro ma nwee obi ụtọ n'ihe ọ ghọrọ.
Ibmụnne na nwanne nwanyị Habib Diallo: ekele Ozi Thies mediamụ mgbasa ozi, ụmụnne Habib Diallo Yoan Dieng Habib na Tahiti Habib nwere nnukwu obi ụtọ maka nnukwu ihe nwanna nwoke rụzuru. O yikarịrị ka otu ma ọ bụ ụmụnne abụọ ga-anwa ịgbaso nzọụkwụ Habib.
Zute ibmụnne na Nwanne nwanyị Habib Diallo.
Nnukwu Nwanna Habib Diallo: Habib Diallo si big nwanne bụ otu n’ime ndị isi na-akwado ya n’ala nna ya. A maara nnukwu nwanne nwoke nwere oge kachasị mma mgbe a hụrụ ya na agba mba ya. Inwe onye otu ezinaụlọ na mba ndị Senegal na-ewetara ya nnukwu nganga.
Zute nwoke nke nwere ike ịbụ nwanne nwanne ma ọ bụ nwanne nna Habib Diallo
Habib Diallo kwuru Nzọụkwụ Nne: N'ịbụ onye a na-ahụkarị na nna Habib Diallo, nne na ezinụlọ ya na-enwe obere obi abụọ na ọ nwere ike ịbụ nne mama nke ndị ịgba ọsọ. O nwekwara ike ịbụ nne nke otu obere ụmụaka na-ese n'elu.
Zute nwanyị nke nwere ike ịbụ Habib Diallo's Nzọụkwụ Mum
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Ndụ nke Onye
Mata ụdị ndụ Habib Diallo ga - enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ. Aụzọ si football, Habib bụ onye hụrụ n'anya ịnọnyere ndị mmadụ ọkachasị ndị nke ezinụlọ ya na nke ya. Ọ na-enwe mmasị igosipụta ịdị umeala n'obi n'etiti aha ndị egwuregwu nke oge a.
Mata Habib Diallo thedị egwuregwu nke egwuregwu.
Nke abuo na ndu nke onwe ya, Habib lere anya Didier Drogba, arụsị ya na onye nlekọta ọrụ. Mmasị ya maka Drogba from si na Senegal- bidoro site n'oge ndị ahụ ya na nne na nna ya biri ma na-aga na-elele Premier League site na nlele.
N'ikpeazụ na ndụ Habib Diallo bụ ụdị ya maka Nkịta. Footballers ya; Messi, Daley kpuru ìsì, Marcelo, Aaron Ramsey na James Rodriguez wdg niile hụrụ anụ ụlọ ha n'anya (nkịta). Habib Diallo onye esere n'okpuru na nke ya abughi ihe ozo. Foto dị n'okpuru ebe a bụ onye Senegal na-elekọta nwa ya ọ hụrụ n'anya.
Ọtụtụ ndị ịgba bọọlụ hụrụ nkịta ha n'anya na Diallo nke anyị abụghị otu.
Ọbụna gị onwe gị nwere okwu na-enweghị ntụkwasị obi fọdụrụ na egwuregwu nke oge a, ọ ghaghị echebara mmekọrịta dị n'etiti Habib na nkịta ya mara mma.
Okpukpe Habib Diallo: Dị ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na Senegal, o yikarịrị ka nne na nna Habib Diallo zụlitere ya Ozizi okpukpe Alakụba. Anyị ga-emelite gị ozugbo enwere ihe ngosi foto nke Habib na-ekpe okpukpe ya.
Habib Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ - Eziokwu efu
Ndị egwuregwu bọọlụ ama ama ama nke FC Metz: Tupu Habib Diallo, enwere ndị ọzọ FC Metz, Legends ndị jikwa egwu dị egwu wee bibie mpaghara ahụ ihe mgbaru ọsọ. Site n'elu aka ekpe gaa aka nri n'okpuru, anyị nwere Kalidou Koulibaly, Emmanual Adebayor, Sadio Mane, Frank Ribery na Louis Saha.
Ndị ama ama ama ama ama FC Metz.
Site na ala aka ekpe gaa n'aka nri anyị nwere Rigobert Song, Sylvain Wiltord, Robert Pires, Miralem Pjanić na Papiss Cissé.
Ogbugbu: Omenala igbu egbugbu ama ama nke ukwuu n’ụwa bọọlụ taa dịka a na-ejikarị ya egosipụta okpukpe mmadụ ma ọ bụ ndị ha hụrụ n’anya. Habib Diallo anaghị egbu egbu. Aka ya “INAYA- XIIIXIMMXVI”Ahụrụ aka ekpe ya bụ ihe osise na - anọchite anya ihe ma ọ bụ onye ọ na - ejide obi ike n’obi ya.
Amaghi ihe ihe egbugbu ya putara. Mana anyị maara na ọ jidere ya nso n'obi ya.
Iri ọkwa FIFA siri ike: Fim ndị egwuregwu emelitere bụ isiokwu mkparịta ụka na-ewu ewu mgbe ọ bụla ewepụtara FIFA ọhụụ, na FIFA 20 adịghị iche maka Habib Diallo. Onye egwuregwu bọọlụ na Senegalese nwere nsogbu nke ịchọpụta na o merụrụ ahụ n'agbanyeghị na ọ gbara ihe mgbaru ọsọ 26 n'otu oge.
Habib Diallo FIFA Ratings na-egosi na ọ dị oke ụjọ.
Imirikiti ndị egwuregwu 20 FIFA agaghị enwe afọ ojuju maka Habib Diallo. E nwere mmetụta na ọ nwetaghị otuto ọ kwesịrị.
Ọ bụ ihu nke ụlọ ọrụ azụmaahịa dị n'ọtụtụ: Habib anaghị enweta ego naanị maka ịgba bọọlụ gburugburu ubi. Ego ndị si na Nkwado na-ekere òkè dị ukwuu na isi mmalite ego ya. Habib n'oge edere n'oge na-adịbeghị anya mechiri nkwado nkwado Herbalife International nke America, Inc.
Habib Diallo agaghị eche maka ịmegharị mgbasa ozi iji tinye ego na akpa ya.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Habib Diallo Childhood Story Plus Uzo nke Utold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Ifiedbọchị agbanwee: November 9, 2020